अव आईसीसीले गर्दैछ नेपाली क्रिकेटलाई ब्याण्ड - Brizikhabar
अव आईसीसीले गर्दैछ नेपाली क्रिकेटलाई ब्याण्ड
२२ पुष २०७४, शनिबार १३:२३ January 6, 2018 Brizi Khabar	0 Comments
काठमाण्डौ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, पदको लोभ, स्टर्लिङ पाउण्डमाथिको लुछाचुँडी, आफ्नाहरुलाई नै पदमा राख्नु पर्ने घिनलाग्दो खेलले नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघ क्यान यस्तो नराम्रो विवादमा फस्न पुग्यो ।
जस्को कारण भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश त के क्रिकेटका दर्जनौ हस्ती भनाउँदा मुलुकलाई हराउँदै नेपाली खेलाडीले चुल्याएको शानमा समेत ग्रहण लाग्ने स्थिति आइपुग्यो ।
यही विवाद र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले बदनाम बनेको नेपाली क्रिकेटलाई नेपाली खेलाडीहरुको स्वतः स्फुर्तरुपमा जुराएको जोशले बचाएको थियो । तर क्रिकेटका लागि विश्वको सर्वोच्च संस्था इन्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल आइसीसीलाई राजनीति रुच्दैन, विवाद देख्न पनि मान्दैन ।
यही कारण नेपालको क्रिकेटलाई आइसीसीले गत बर्षको वैशाखमा निलम्बन ग¥यो । यसैबीच पनि क्रिकेटमा उदाउँदो एउटा मुलुकको नाताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुन बन्देज लगाएन, बाँकी हिसाबकिताब सबैमा भने चुकुल लगाइदियो ।
नेपाली क्रिकेटले आफ्नो स्वाधीनता यही गुमाउँदा पनि पीडाबोधसहित रमाउनु पर्ने एउटा ठाउँ रह्यो । तर नेपाली क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा भने प्रतिबन्धित भएन् । स्वाधीनता गुमाएको कस्तो स्वाद हो यो ?
यसपछि पनि विवाद मिलाउ, राजनीतिक नगर, आइसीसीको चार्टर अनुरुप अघि बढ्दै विधान सच्याऊ भनेर आइसीसीले बारम्बार भन्यो तर कस्ले सुन्ने ?
आइसीसीको आदेशलाई अटेर गर्नेहरुको कारण नेपालको क्रिकेटमा डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ यतिखेर ।
आइसीसीले तिमीहरुको सदस्यता कायम राख्नु पर्ने कारण के भन्दै मागेको प्रष्टीकरणको जवाफ नेपालले गत डिसेम्बर २२ मा दिएको छ तर त्यस्को जवाफ कस्तो आउला यही डरले सबै क्रिकेटप्रेमी नेपाली काँपीरहेका छन् यतिखेर ।
← निर्वाचनमा विजयी भएका भएकाहरुको पनि जमानत जफत
‘शेरबहादुर, माघ १९ मा रिलिज हुने पक्का →
नेपाल मगर युवा संघ सिद्धार्थ नगर भैरहवा ले रक्तदान तथा खेलकुद कार्यक्रम सम्पन्न
१४ फाल्गुन २०७३, शनिबार १६:०८ Brizi Khabar 0
झापामा जातीय विभेद् हुन छाडेको हो त ?
२६ माघ २०७३, बुधबार ०२:५७ cityphone 0
गुम्ला है ? सूचनाको हक के
२६ माघ २०७३, बुधबार ०२:५८ cityphone 0